Ilungu lobudoda esiboniswe nguMicrosoft kwiphepha lasekhaya lenjini yokukhangela | Iindaba zeGajethi
Ngokususela ekusekweni kwayo, uGoogle ukwazile ukubamba ingqalelo yabasebenzisi abaninzi ngenxa yendlela ecocekileyo nelula yokusivumela ukuba sikhangele ngokukhawuleza ngaphandle kokufumana ulwazi oluninzi, njengoko kwenzekile kuYahoo okanye eTerra. Emveni kweminyaka, UGoogle ulandele uyilo olufanayo, uyilo iBing oluye lwalusebenzisa ngokwalo ukukhangela injini, kodwa ngokungafaniyo naleyo, isinika imifanekiso engemva yamaphupha, nganye intle ngakumbi.
Nangona uGoogle engukumkani, i-injini yokukhangela yeMicrosoft isinika imisebenzi engafumanekiyo kuGoogle, yiyo loo nto ngamanye amaxesha iyinjini yokukhangela ebhetele kunenye yabafana abajonga intaba. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, enye yezo mifanekiso mihle yasibonisa ulwandle eCroatia, apho ngokungangqamani kwakukho umzobo wepenisi esantini, ipipi engazange ibonwe nguMicrosoft.
Lo mfanekiso ubalaseleyo wolwandle lwaseCroatia waboniswa eUnited States kuphela, apho injini yokukhangela yaqala ukufumana inani elikhulu lotyelelos, yintoni eyatsala ingqalelo yeMicrosoft kwaye ke umba wafikelela kwinethiwekhi yoluntu, apho umfanekiso wepenisi esantini wafikelela kwizikhundla eziphezulu nakwi-reddit. Kwiiyure ezimbalwa emva kokuba lo mfanekiso ungene kwintsholongwane, iMicrosoft yaqonda ukongeza ukuba lo mfanekiso mhle wolwandle lwaseCroatia kwaye uhlele ifoto, isusa uphawu lobudoda olwalungene.
ICroatia isungule umkhankaso obanzi wokhenketho kwihlabathi liphela ngeli hlobo Kwaye ukuba siyayicinga, mhlawumbi ipipi ye-Bing ibinokuba ngumkhankaso ekucingelwa ukuba ubonise ilizwe. Okucacileyo kukuba asisoze sazi, kodwa imikhankaso yentengiso kufuneka ibe ngakumbi nangakumbi ukuze babenakho ukutsala umdla wabantu abajolise kubo, kwaye le ndlela yokwenza oko ibinokuba yenye, kwaye intle kakhulu. kunjalo nje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ilungu lobudoda esiboniswe nguMicrosoft kwiphepha lasekhaya lenjini yokukhangela
I-Specdrums, indlela enobuchule kakhulu yokubeka isingqisho kwiminwe yakho